Saddex Arrimood Oo Xulka Qaranka England Ku Jabay Ciyaartii Croatia | Saxil News Network
Saddex Arrimood Oo Xulka Qaranka England Ku Jabay Ciyaartii Croatia
Hargeysa, (saxilnews)-Xulka qaranka Croatia ayaa iska xaadiriyey finalka Koobka Adduunka kaddib markii ay dagaal adag oo la galeen England oo gool kaga horreysay.
Kevin Trippier ayaa England u dhiibay hoggaanka ciyaarta daqiiqaddii 5-aad ee bilowgii ciyaarta markii uu laag xor ah oo aad u qurux badnaa dhex dhigay shabaqa Croatia, laakiin Ivan Perisic ayaa qaybtii labaad keenay goolka barbar-dhaca ka hor intii aanu wakhtigii dheeraadka ahaa ee lagu daray ciyaarta aanu Mario Mandzukic dhalinin goolka guusha.
Ciyaartan iyo natiijadadeeda waxa saamayn ku yeeshay saddex arrimood oo lagaga gacan sarreeyey England, jabkoodana sababay, kuwaas oo kala ah:
1-Croatia oo farsamo ahaan u jebisay England: Qaybtii hore ee ciyaarta England ayaa joogtay meel kasta oo garoonka, balse qaybtii labaad Croatia ayaa talinaysay. Markii laga soo noqday wakhtigii nashada, Croatia ayaa awood hor leh lasoo gashay garoonka, waxaanay jebisay khadkii dhexe iyo difaacii wada shaqaynayey, tiro ahaan iyo tayo ahaanna kubbadihii laysku dhiibayey, waxay ku jireen lugta Croatia.
2-Croatia waxay ku gacan sarraysay dagaalkii khadka dhexe: Mid ka mid ah meelaha aasaasiga ahaa ee qaybtii dambe ay sida weyn gacanta ugu dhigay Croatia waxay ahayd khadka dhexe, halkaas oo ay ka hagayeen xiddigaha waaweyn ee Modric, Rakitic iyo Brozovic oo qaybtii dambe sii xoogaystay.
3-Tababare Zlatko Dalic ayaa kaydka geliyey Andrej Kramatic, waxaanu shaxdiisa ku bilaabay Marcelo Brozovic si uu u caawiyo xiddigaha khibradda badan, hase yeeshee dhibaato badan oo ay la kulmeen qaybtii hore kaddib, waxay dib isku abaabuleen qaybta labaad oo ciyaartooyada England ay u diideen inay wax dhaq-dhaqaaq ah ka sameeyaan khadka dhexe.
4-Croatia oo ka taxadar badnayd England: Harry Kane ayaa helay fursad qaali ah qaybtii labaad ee ciyaarta markii kubbad madax ah uu si xun ugu dhuftay, waana midda kaliya ee ay ku heli karayeen inay guul la hoydaan. Sidaas oo kale ayay ciyaartyahannada gacanta sare lahaa ee Croatia u heleen fursado dahabi ah, gaar ahaan dhawr jeer oo uu goolhaye Pickford dirqi kaga badbaadiyey Mandzukic iyo Perisic.